QARAMADA MIDOOBEY OO KA HADASHAY DOORASHADA SOMALIA | Saxil News Network
QARAMADA MIDOOBEY OO KA HADASHAY DOORASHADA SOMALIA
August 3, 2016 - Written by Abdisalaan Harir
Moqdisho (SaxilNews):- Xilli laga cabsi qabo in dib u dhac ku yimaado doorashada waddanka Somalia ka dhacaysa sannadka 2016 ayaa waxaa ka hadashay Qaramada Midoobay oo faah faahisay kaalintii ay ka cayaareen in la fariisiyo hannaanka kala guurka ah islamarkaana doodo laga sameeyo habka ugu haboon ee loo marayo doorashada.
Wakiilka Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Arrimaha Somalia Michael Keating ayaa waraysi gaar ah oo bixiyay ku sheegay inay doonayaan sidii waddanka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah taasoo qabsoonta waqtigii loogu talo galay isagoo intaasi raaciyay in looga fadhiyo fulinteeda dowladda haatan jirta.
Keating, ayaa xusay in doorkooda doorashada yahay bixinta talooyin iyo farsamooyinka loo baahanyahay laakiin aysan ahayn kuwa sida tooska ah u maamulaya shaqada dowladda.
Wuxuu sheegay in farqi weyn u dhaxeeyo doorashadii dhacday 2012 iyo midda la qorsheynayo inay qabsoonto 2016 isagoo xusay in madaxda hadda joogta doorteen 275 Xildhibaan ay soo xuleen 135 Oday dhaqameed, balse midda soo socota dadka wax dooranaya intaas ka badanyihiin islamarkaana goobo kala duwan lagu qaban doono iyadoo la adeegsanayo codayn dad-ban iyo mid toos ah.
Qoondada haweenka iyo mowqifka ay kaleeyihiin ayaa wax laga weydiiyay, wuxuuna Wakiilku sheegay in taas lagu go’aamiyay madashii wadatashiga islamarkaana la siiyay dumarka kuraas dhan 30%.
Shaqada Guddiga Hirgalinta doorashada ayaa waxa la weydiiyay, wuxuuna tilmaamay in loo xilsaaray qaabkii ay u caddayn lahaayeen shuruucda iyo xeerarka loo marayo doorashada isagoo xusay inay la shaqayn doonaan guddigaas iyo dhammaan xubnaha ay khusayso marxaladdan.
Mahad-celin ayuu usoo jeediyay dhammaan madaxda dowladda Federalka Somalia iyo kuwa maamul goboleedyada oo sheegay inay kaalin weyn ka cayaareen sidii dalka isbadal uga dhici lahaa sannadkan gudihiisa.
Waraysiga Keating ayaa kusoo beegmaya xilli Arbacada 03 Augusto, 2016 magaalada Muqdishu ka furmayo shir looga hadlayo arrimaha doorashada waddanka iyo dib u dhac laga cabsi qabo inay ku timaado waqtigii lagu ballamay.